Qaybaha guurka gabdhaha.
Qaybaha guurka gabdhaha
Umma: Anigu waxaan jecelahay gabdhaha iyo haweenka, gaar ahaan arrimaha caafimaadka dhalmada ee dhalinyarada iyo caafimaadka galmada iyo taranka ee gabdhaha da'da yar. Champions League Isbedelka waxay badbaadinaysaa nolosha haweenka iyo carruurta ee Nigeria iyadoo awood u siinaysa hoggaamiyeyaasha maxalliga ah iyo ururrada inay hagaajiyaan caafimaadka taranka, hooyada, dhalaanka iyo caafimaadka ilmaha iyada oo loo marayo udoodida, waxbarashada, sheekada iyo wada-xaajoodka istiraatiijiga ah. Dadkaasi ayaa waxaa ka mid ah Maxamed Filibiin oo isagu qaba gabar Hindi ah, waxaana uu sheegay inuu ka mid yahay dadka ku najaxay guurka gabdhaha Hindida. Fadlan soo buuxi bayaankan: Waxaan ahay Champion for Change sababtoo ah Champions League Isbedelka ayaa ka dhigaya qaabka barnaamijka oo ay sameeyeen dadaalka walaasheed ee ay soo saartay, Inay Lead Leader, taas oo gacan ka gaysatay horumarinta caafimaadka, waxbarashada iyo hab nololeedyada in ka badan boqolkiiba 3 gabdhaha adduunka tan iyo Raggan qaar ayaa sidoo kale gabdhaha ka doonta qoysaskooda, kuwaas oo marka ay muddo aan badnayn joogaan isaga dhuunta, taasi oo walaac ku keentay mustaqbalka gabdhaha. Haysashada meelahan waxay abuuri doontaa quruun caafimaad qaba oo soo hormarin doona awood dheeraad ah; Tani waxay si toos ah u horumarin doontaa dhaqaalaha dalka. Wikimedia Commons waxee heysaa war la xiriiro: Guur. Ragga Soomaaliyeed ee gabdhaha u doonta India 16 Oktoobar
Ma Guur mise Gaabsi Ragga Soomaaliyeed ee gabdhaha u doonta India BBC News Somali
Dhibaatooyinka uu sababo guurka xilliga hore ah ee gabdhaha News From Somalia
Cunug Walaaca Cunuga La Kulanka Taxanaha Qaybaha Champions Qeybta 7 Kacbaar
Ragga Soomaaliyeed qaarkood oo guurka qarsoodiga iyo mid muddo. Dhibaneyaasha sannadkii hore la caawiyey ayaa waxaa ka mid ahaa 7 gabdhood oo lagu xiray xarun ku taalla Soomaaliya. Guurka waa maalin farxad leh, qof walba neh inta oo noolyahay mar uu warta nabada oo macnaheedu uu yahay dhulkii ha ugu badan ee .
Guurka waa maalin farxad leh, qof walba neh inta oo noolyahay mar uu guursanaa, guurka sidiisa ba waa nolosha biniaadanka.
Bishii Nofembar ee sanadkaan waxaan ku jiri doonaa Machadka Dhexdhexaadiyaha Sharciga ah iyo Guud ICMCoo ah hay'ad xirfad leh oo mas'uul ka ah tababarka, xeerka iyo horumarinta dhaqanka xalinta khilaafka kale ee Nigeria. Soomaalida marka ee is guursanaayaan waxaa loo qabtaa buraanbur iyo cayaar. Aroos waa dhacdo dabaaldega midowga labo qof ku galayaan guurka. Umma: Waan ku raaxeystaa inaan guriga joogo ama aan la baxo caruurta waxaan jeclahay inaan wax karsado.
Le meridien lav split address Waxaan sidoo kale ka shaqeeyey sagaal sano oo baananka saddexda ah ka hor intaanay ka soo bixin qaybta si ay si buuxda ugu biiraan hawlaha horumarinta.
Waxay xaqiijisay in, marka la siiyay fursad ay ku lug yeeshaan wadahadallada loogu talagalay inay wax ka qabtaan caqabadaha, haweenka iyo gabdhuhu waxay horumarin karaan xeelado iyo xalal wanaagsan.
Video: Qaybaha guurka gabdhaha Raga iyo qaybaha ay ukala baxan marka ay gabdhaha shukaan san hayaaan
Umma: Waxaan ku soo koray qoys aad u tiro badan, oo ah ilmaha shanaad ee qoyska labo iyo toban 4 wiilasha iyo gabdhaha 8. Muuqaalka Akhri Itusi xogta Itusi taariikhda.
Tonia: Ku safrida walaalaha iyo qoysaskooda si ay u soo booqdaan waalidiinteena; waxay ahayd madadaalo!
Guurka gabdhaha garoobadda ah ee caruurta haysta xikmadiisu Waa maxay.,?? ???? Ikhwaanii sidaan ognahay nabiga scw wuxuu.
Hadaba guurka ay sameeyaan raga musaafurka ah ee ka soo. Dhacdooyinka xanuunka badan ee gabdhaha kala kulmaan guurka noocaan.
In la xakameeyo guurka gabdhaha aan qaangaarin; uurka gabdhaha da'da yar, iyo . iyo wada shaqaynta barnaamijyada nafaqaynta ee qaybaha kala duwan.
Iskuday in la sii wado taxanaha taxanahan oo soo bandhigaya qareeno badan oo reer Nigeria ah.
Tonia: Marka la eego gabdhaha yaryar waxay u dhintaan sababaha laga hortagi lahaa haddii ay ku filan tahay RMNCH taranka, hooyada, dhalaanka, iyo caafimaadka ilmaha oo la heli karo oo arkaya dhallaanku inay xanuunsadaan ama u dhintaan cuduro laga hortago ayaa jabin kara qalbigayga. Waxaan aaminsanahay in wadashaqayntu ay keeni karto isbeddel saxan xaaladda caafimaadka ee Nigeria. Qoralka waa la heli karaa sida uu qabo Ruqasadda Commons ee hindisidda ee marka loo eego la midka ; waxaa soo hoos gali kara qodobo kale.
Qalabka shaqada Maxaa meeshaan la xiriiro Isbedelada la'xiriira Soo geli file Bogagga khaaska ah Linkiga daaimka ah Macluumad ku saabsan Qaybta caddeynaha Boggaan soo xigo. Gadaal ilaa kor.
Bra 34 ddd no underwire Tonia: Anigu waxaan ahay cunuga 3rd ee askar milatari iyo macalin.
Umma: Helitaanka helitaanka kuwa aadka ugu hooseysa, "kuwa ugu saboolsan ee saboolka ah, gabdhaha saboolka ah iyo hooyooyinka qaangaarka ah waa caqabadda ugu weyn, gaar ahaan marka ay tahay in ay ka raadsadaan ragga ka raali noqda iyaga oo tagaya xarumaha caafimaadka ama waxbarashada gabdhahooda.
Qaar ka mid ah sababaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah dhaqanka iyo diinta tarjumaadda. Champions League Isbedelka ayaa ka dhigaya qaabka barnaamijka oo ay sameeyeen dadaalka walaasheed ee ay soo saartay, Inay Lead Leader, taas oo gacan ka gaysatay horumarinta caafimaadka, waxbarashada iyo hab nololeedyada in ka badan boqolkiiba 3 gabdhaha adduunka tan iyo Champions League Isbedel: Wax inooga sheeg waxoogaa naftaada, asalkaaga shaqsiyeed iyo waxbarashadiisa.
Champions League Isbedelka: Waxyaabaha ugu xiisaha badan ee aan sameeyay sannadkii la soo dhaafay waa:.
ayaa Qaramada Midoobay waxay ugu baaqday dhamaan qaybaha Dhacdooyinka sii socda ee guurka caruurta iyo guurka khasabka ah ayaa sii ah haweenka iyo gabdhaha, Soomaaliya waxay u baahantahay inay. Muqdisho: Guurka xilligga hore ah ee gabadha yar iyadoo aan u bislaanin la guursado, ayaa waxay ku keentaa gabdhaha yar yar.
oo ah urur udub dhexgal ah si wax looga qabto caafimaadka gabdhaha iyo gacan ka geysaneysaa in dib loo dhigo da'da guurka ee gabdhahan oo kale.
Umma: Waxaan ku soo koray qoys aad u tiro badan, oo ah ilmaha shanaad ee qoyska labo iyo toban 4 wiilasha iyo gabdhaha 8. Aroos khaniis Maraykanka.
Yarrad Gabba' Xeedho Diiqo. Raggan qaar ayaa sidoo kale gabdhaha ka doonta qoysaskooda, kuwaas oo marka ay muddo aan badnayn joogaan isaga dhuunta, taasi oo walaac ku keentay mustaqbalka gabdhaha.
Gadaal ilaa kor. Guurka waa maalin farxad leh, qof walba neh inta oo noolyahay mar uu guursanaa, guurka sidiisa ba waa nolosha biniaadanka. Maxay tahay arin keli ah oo aad ugu qanacsan tahay arimahan?
PEREMPUAN GEMUK DI MATA LELAKI FORUM Istaraatejiyadeena ayaa sidoo kale waxay gacan ka geysaneysaa in dib loo dhigo da'da guurka ee gabdhahan oo kale, oo dib loo dhigo dhalashada dhalmada. Waxaan aaminsanahay in wadashaqayntu ay keeni karto isbeddel saxan xaaladda caafimaadka ee Nigeria.
Nooma aysan suurtagelin inaan la xiriirno mas'uuliyiinta laamaha ammaanka ee Hyderabad, hase yeeshee waxaa jira dadaalo ay dowladda Hindiya waddo, kuwaasi oo looga hortagayo guurka muddada kooban iyo midka qarsoodiga oo haddii ay sii socdaan dhaawac weyn u geysan kara sumcadda iyo fikirka laga aaminsanyahay dadka Soomaalida ee dalka Hindiya u tago waxbarshada, ganacsigacaafimaadka iyo dalxiiska.
Wikimedia Commons waxee heysaa war la xiriiro: Guur. Nidaamkeena deeq-lacageedkayagu waa mid cusub sababta oo ah dabeecaddiisa oo dhan; Ma aha oo kaliya gabadh maaliyadeed oo dhaqaale ahaan loo taageero inay dhigto dugsi dhigashada, waxaa sidoo kale la siiyaa meel amaan ah oo wax lagu barto oo laga wada hadlo arrimo saameynaya nolosheeda.
Video: Qaybaha guurka gabdhaha Allah GABDHAHA soomaliyeed maxaa haysto :GUURKA QIYAANADA QURBO JOOGTA :reaction video
2 Replies to “Qaybaha guurka gabdhaha”
Waxaan aaminsanahay in wadashaqayntu ay keeni karto isbeddel saxan xaaladda caafimaadka ee Nigeria.
Copyright © 2018 Qaybaha guurka gabdhaha. All Rights Reserved. Theme by